के दैनिक एक काचो लसुन खान सुरक्षित छ? – Ramailo Sandesh
के दैनिक एक काचो लसुन खान सुरक्षित छ?
यदि तपाईं हप्तामा दुईदेखि तीन पटक काचो लसुन खान्नुहुन्छ भने यो तपाईंको स्वास्थ्यको लागि अत्यधिक लाभदायक साबित हुनेछ।काचो लसुनका धेरै फाइदाहरू छन्
यसको सेवन गर्दा शरीरमा कोलेस्ट्रॉलको मात्रा बढ्छ।
क्यान्सर जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ।
मधुमेह जस्ता रोगहरू देखा पर्दैन।
झुट्टा विवरण पेश गरेर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्नेलाई सघाएको आरोप लागेका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका वडाध्यक्ष पुर्म पुन र सचिव शिलु आलेमगरले प्रहरीसमक्ष आत्मसर्मपण गर्नुभएको छ ।
नक्कली छोरीको जन्मदर्ता गर्नुभएकी सचिव आले र सिफारिस गर्नुभएका वडाध्यक्ष पुनविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । बुधबार आफैँ प्रहरी कार्यालयमा आएका पुन र आलेलाई बिहीबार म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार दुवै जना प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ । अर्कैको छोरीलाई आफ्नो छोरी भएको नक्कली कागजात बनाएर नाबालक परिचयपत्र बनाउन खोज्ने धवलागिरि–३ का ५५ वर्षीय रेशमबहादुर भण्डारीलाई यही २०७७ फागुन ९ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
दीपक भण्डारीकी १५ वर्षीया छोरी दिवा भण्डारीलाई आफ्नो छोरी भएको दाबी गर्दै नाबालक परिचयपत्र बनाउन रेशमबहादुरले प्रशासनमा पेश गरेको जन्मदर्तामा सचिव आले र सिफारिसमा अध्यक्ष पुनको हस्ताक्षर थियो ।
भण्डारीविरुद्ध झुट्टा विवरण पेश गरेर लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा छानबिन गर्ने क्रममा वडाध्यक्ष र सचिव पनि अनुसन्धानमा पर्नुभएको हो । रेशमबहादुरले दिवालाई विदेश (जापान) पठाउनका लागि नाबालक परिचयपत्र बनाउन लागेको बताउनुभएको छ । सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति विदेश जानका लागि नाबालक परिचयपत्र बनाउनुपर्छ । रेशमले दिवाको नाबालक परिचयपत्र बनाउन फागुन ८ गते प्रशासनमा कागजात पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले पेश गरेका कागजात शङ्कास्पद देखिएपछि अनुसन्धानका लागि प्रशासनले प्रहरीमा पठाएको थियो ।
भोलि चैत ५ गते बिहिबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल
मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी पत्नीले भनिन्, हामीले हेलिकप्टर चढ्दा तपाईँको टाउको दुखाइ किन ?
दोहोरी साझमा काम गर्ने केटिलाई यौ न क र्मी जस्तो व्यवहार किन गरिन्छ (भिडियो हेर्नुस्)